သတငျး / ပါဝငျလာခွငျး
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်(DSEZ)နှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အကြားဆက်သွယ်သည့် နှစ်လမ်းသွားလမ်းများ သည် ထ စီမံကိန်း နောက်ခံသမိုင်ားးဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းနှင့် စီမံကိန်းနယ်မြေများ၏ တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ GMS ၏ တောင်ပိုင်းစီးပွားရေးစကြံန်ကို ချိတ်ဆက်အထောက်အပံ့ပြုမည့် ASEAN အာဆီယံနိုင်ငံများ ချိတ်ဆက်ရေး အထူးစီမံချက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့နှင့် ဆကျဖတျရနျ..
စီမံကိန်း၏ တည်နေရာနှင့် ၀ိသေသလက္ခဏာများ
အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရန်နှင့် အများပြည်သူပါဝင်ခြင်းရှိရန် နယ်မြေဒေသအပိုင်းတို့တွင် လမ်းမတလျောက်လုံး၏ ၀ဲယာတစ်လျောက်လုံးအား လေ့လာသုံးသပ်သွားမည်။ ဆကျဖတျရနျ..
စီမံကိန်းနှင့်ပါတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ စုစည်းခြင်း/နှစ်လမ်းသွားလမ်းမ
စီမံကိန်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်နယ်မြေ၏ လူမှု - စီးပွားရေးအချက်အလက်များအပါအ၀င် လေ့လာမှုဧရိယာနှင့် ပါတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ ထိုင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ အမျိုးသားနည်းဗျူဟာများ၊ လူဦးရေကိန်းဂဏန်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အရည်အတွက်၊ စီးပွားရေးအချက်အလက်များ၊ ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှု အချက်အလက်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စသည်တို့အပြင် နယ်မြေဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်၊ နှင့် စီမံကိန်း၏ တန်ဖိုးတိုးးပွားစေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတို့နှင့်ဆက်စပ်သော အချက်အလက်များကို စုစည်းမည်။ ထို့အပြင် ဤစာပိုဒ်တွင် အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံထားသော အချက်အလက်များ ၃ အုပ်စု ခွဲထားသည်။ ဆကျဖတျရနျ..
ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်း
ဤစီမံကိန်းတွင် ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အချက်အလက်များကို ကောက်ယူမည်။ ယာဉ်အသွားအလာတိုင်းတာမှုနှင့်အတူ ယခင်စစ်တမ်းကို ပြန်လည်လေ့လာပြီး ယာဉ်သွားလာမှုနူန်းထား၊ အစနှင့်အဆုံးနေရာရှိ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ယာဉ်သွားလာမှုအမြန်နှုန်း စသောလက်ရှိစစ်တမ်းတို့အား ကောက်ယူပြီး အောက်ပါ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ လက်ရှိနှင့်လာမည့်နှစ်များ၏ ယာဉ်အသွားအလာပုံစံကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသွားမည်။ ဆကျဖတျရနျ..
အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွင် အပိုင်း ၁၁ ပိုင်းပါဝင်သည်။ အကြံပေးသူမှ ၄င်းအပိုင်း ၁၁ ပိုင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ၃ ဆင့်ခွဲခြားထားသည်။ ဆကျဖတျရနျ..
အကြံပေးသူမှ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိသည့် လမ်းဆုံများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းများ၊ ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းများ၊ ကုန်းအတက်အဆင်းမတ်များ စသည်တို့အတွက် အန္တရာယ်ကင်းရန်နှင့် စံချိန်စံညွန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်။ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းကို ရေဆွဲပြီး ဒီဇိုင်းရလဒ်များကို နောက်တဆင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာတွင် တင်ပြသွားမည်။ အန္တရာယ်ကင်းရေးအခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဆကျဖတျရနျ..
စစ်တမ်းနှင့် နှစ်လမ်းသွားပိုမိုကောင်းမွန်ရေး အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းများအရ စီမံကိန်းဧရိယာနယ်မြေရှိ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းများကို ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကနဦးသဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION (IEE) သို့မဟုတ် မူလပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းအကဲဖြစ်မှု ORIGINAL ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) REPORT IMPROVEMENT တို့ကိုလေ့လာသွားမည်။ ဆကျဖတျရနျ..
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဘက်ရှိ နှစ်လမ်းသွားလမ်းမ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး စီမံကိန်းအောက်တွင် ယျေဘူရသဘောထားရယူခြင်းအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည့်သူများအားလုံး မိမိတို့အခွင့်အရေးနှင့် ပါတ်သက်သည့် အမြင်များ၊ အချက်အလက်များ နှင့် သဘောထားတို့အား တင်ပြနိုင်မည့် အစီအစဉ်များပါဝင်သည်။ ၄င်းအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဤသညျမှာစီမံကိနျးကနျထရိုကျတာ၏ရှေးခယျြရေးမြားအတှကျလလေံစာရှကျစာတမျးမြားပွငျဆငျမညျပါလိမျ့မယျ။ အကောငျ့ထဲသို့နိုငျငံတကာစံခြိနျစံညှနျးမြားယူခွငျး။ အနညျးဆုံးအောကျပါစာရှကျစာတမျးမြားပါဝငျသညျ: ဆကျဖတျရနျ..
အိမ်နီခြင်းနိုင်ငံများ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီ (ပြည်သူပိုင်အဖွဲ့အစည်း)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) or NEDA was established on 17 May 2005 under the Royal Decree on Establishment of Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization), B.E. 2548, announced in the Royal Thai Government Gazette, Volume 122, Part 39A, dated 16 May 2005. The Royal Thai Government Gazette consists of seven sections, 54 articles, and one transitory provision as follows:
သတငျး & ပါဝငျလာခွငျ
NEDA participates in the conference
with Tanao-Sri cabinet in Myanmar
Senior Colonel Saranyu Viriyavejakul, D.Sc., Vice President of Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) and the representatives from Ministry of Construction led by H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway participated in the conference with H.E. U Myint Maung, Chief Minister, Tanintharyi Regional Government and the Tanao-Sri cabinet, the local government in the area who are responsible for Two-Lane Road Improvement Project connecting Dawei Special Economic Zone and Thai-Myanmar boarder. The conference aimed to report the project progress and brief the Draft Final Report of the Survey and Design of Two-Lane Road Improvement Project connecting Dawei Special Economic Zone and Thai-Myanmar boarder at the Office of Tanao-Sri Ministers, Dawei, The Republic of the Union of Myanmar on 28th August 2019.
NEDA takes part inaroute survey and the progress
of the two-lane road improvement project
Senior Colonel Saranyu Viriyavejakul, D.Sc., Vice President of Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) took part inaroute survey and consideration of Wildlife Crossing position including the progress of the study and design of two-lane road improvement project connecting Dawei Special Economic Zone and Thai-Myanmar boarder, with the representatives from Myanmar’s Ministry of Construction led by H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway and the representatives from World Wildlife Fund (WWF), at Dawai, Republic of the Union of Myanmar on 29th August 2019.
Director General (DOH)
U Ohn Lwin
Vice president of NEDA
Senior Colonel SaranyuViriyavejakul, D.Sc.
Meeting with community leaders at Myitta village On 15 May 2019
Explain project information to villagers at Myitta village on 15 May 2019
Explain project information to community leaders at Hti Hkee village on 15 May 2019
Explain project information to villagers at Hti Khee village on 17 May 2019
Explain project information to community leaders at TA Laing YA village on 17 May 2019
Meet the leaders of Gad Tra Khee village on 17 May 2019
Small group meetings at Ka lone Htar Village, Dauk Lauk Village, Tha Loat Htar Village, Pa Dao Geon Village, On 30 August 2019 at the village hall with 32 attendants
Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants
Meet community leader of Tha Khat Done Village on 31 August 2019 at the leader’s office
Meet the leader of Sin Byu Daing Village on 31 August 2019 at the leader’s office
Small groups meeetings at Byu Chaung Village, Pyin Tha Daw Village, Taung Thone Long Village , Ka Lalt Gyi Village, Ka Thoung Ni Village, Myitta Village, Nyung Tone Village, Mying Kan Baw Village, Sain Plong Village, Kyant Mae Tong Village on 31 August 2019 at the village hall with 42 attendants
Meet the leader of Gad Tra Khee Village On 1 September 2019 at the leader’s office
Meet the leader of Va Do Village, La or Village On 1 September 2019 at the leader’s office
Small group meetings at Hti Khee Village, Amu Village on 1 September 2019 with 10 attendants
Soil and Material Investigation
GPS Base Station Survey